Ralhrang Le KIA Kahnak Ruangah Khuachung Mi Pakhat A Thi - Chin Eleven News
Nammati khuapi pawng Sidenzan khawte ahaum mi Min Aung Hlaing Ralhrang pawl sakhaan (Camp)cu KIA nih July ni 31 zinglei suimilam 4:00am hrawngah an kah i an luh hnawh caah kaphnih kahdohnakachuak.
An i kah nak ah cun ralhrang pawl nih bawmtu ding an cah hna i Mukaawng khua i um mi ralkap pawl nihcun an bawmh hna, Sidenzan khuate cu bomb le meithal hriamngan in an kah caah chuachungmi U Mu Kyaw kum 50anunnakaliam.
နမ္မတီးမြို့ အနောက်ဘက် ဆီးဒင်ယန်ကျေးရွာတွင် KIA နှင့် စစ်ကောင်စီ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ စစ်ကောင်စီမှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီး ထိမှန်ပြီး ရွာသားတစ်ဦး သေဆုံး ဇူလိုင် ၃၁; ကချင်ပြည်နယ်၊ နမ္မတီးမြို့ အနောက်ဘက်ရှိ ဆီးဒင်ယန်ကျေးရွာတွင် တပ်စွဲထားသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်မှ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက် ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
KIA မှ အဆိုပါတပ်စခန်းအား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေစဉ် မိုးကောင်းတွင် တပ်စွဲထားသော စစ်ကောင်စီအမြှောက်တပ်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ကူခဲ့ပြီး အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံး ဆီးဒင်ယန်ကျေးရွာအတွင်း ကျရောက်ပေါက်ကွဲကာ အသက် ၅၀ အရွယ် ဦးမိုးကျော်ဆိုသူ သေဆုံးသွားကြောင်း ဒေသရင်းမြစ်များထံမှ သိရသည်။crd-KTM